Kedu ihe kpatara m ga-eji họrọ igwe nkedo ECOTRUST Die?
Ọ dị mfe. Anyị na-enye gị igwe na-eme ka nrụgide na-anwụ anwụ a pụrụ ịdabere na ya na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. E nwekwara ụdị ndị ọzọ dị elu dị n'ebe ahụ, mana ha ga-eme ka ị kwụọ ụgwọ karịa. Enwekwara ụfọdụ igwe dị ọnụ ala karịa, mana ha anaghị enye ogo ịchọrọ maka nkedo ọnwụ siri ike.
ECOTRUST nyere dị ka Top 5 ika na China, 25 + afọ ọgaranya ahụmahụ na R & D na n'ichepụta, factory PC: 700sets / afọ na elu àgwà ọkọlọtọ, 7x24 kasị mma nzaghachi ahịa & ọrụ n'ụwa nile.
Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta igwe ihe nkedo nrụgide site na 2008.
Ị nwere ike hazie igwe nkedo ọnwụ nrụgide ka ọ bụrụ ihe m chọrọ?
Igwe ihe nkedo ECOTRUST dị mma maka imepụta akụkụ na-achọsi ike. Dị ka ndị ngalaba ụgbọ ala chọrọ?
Obi abụọ adịghị ya. Ọtụtụ ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ OEM na ODM (Benz, BMW, VW, Geely, wdg). A na-anwale igwe anyị n'ụzọ zuru ezu ruo ọtụtụ afọ ma nwee ike ịmepụta akụkụ dị mma maka ndị ahịa na-achọsi ike na ụlọ ọrụ ọ bụla.
Enwere ike ECOTRUST inye m ọrụ nkedo ọnwụ zuru oke?
N'ezie anyị nwere ike. N'ezie, ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị na-ahọrọ ịnweta ọrụ ntụgharị ma soro naanị otu ndị na-ebubata ihe. Anyị na-arụpụta ọ bụghị naanị igwe nrụgide anwụ nkedo, kamakwa akụrụngwa mpaghara metụtara.
Adị m ọhụrụ ịnwụ nkedo. Ị nwere ike ịlele m n'ụzọ kacha mma ịmalite?
Ị nwere ike ịtụkwasị ya obi. Anyị enyerela ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ahụmahụ aka ịnwụ nkedo ka ha mee nzọụkwụ mbụ ha na ụlọ ọrụ a dị ịtụnanya. Anyị na-akuziri ha ka ha ga-esi tọọ nke ọma igwe nrụgide anwụ na otu esi ahazi ihe niile dị iche iche dị na cell ọrụ iji kwalite oge okirikiri nkedo.
Achọrọ m ọrụ nkedo ọnwụ akpaaka zuru oke?
Dịka iwu n'ozuzu, nke kacha akpaaka, ọrụ gị kacha baa uru ga-abụ. Agbanyeghị, dabere na mkpa gị, ị nwere ike ibido na sistemụ nwere obere akpaaka wee kwalite ma emechaa. Nhazi opekempe anyị na-akwado bụ ịnweta igwe nrụgide ọnwụ gbakwunyere ladler akpaaka.